Sababaha keenay in warbaahintu wareysato oo soo deyso warkasta iyo cidkasta waa aragtida iyo dareenka ay ka arkeen in Bulshaddu Aanay:- |
Sababaha keenay in warbaahintu wareysato oo soo deyso warkasta iyo cidkasta waa aragtida iyo dareenka ay ka arkeen in Bulshaddu Aanay:-
1. Daawasho La’aanta iyo Dhagaysi la’aanta wararkooda wanaagsan.
2. Xamaasad la’aanta Tv, website, journal
3. Hadal-haynta dhacdooyinka positive ah ee ay soo daayaan
4. Booqasho la’aanta ardaayadooda kala duwan
5. Dhiiri-galin la’aanta ay la kulmaan kuwaado wanaaga iyo arimaha bulshadda ka shaqeeyaa.
Ka dib waxay si deg-dega u qaateen in bulshadda jeceshay, daawadaan, dhegaystaan , akhristaan wararka aan caadiga ahayn ee ku saabsan hadaladda xanafta leh, beenta iyo saadashaba
Waxa jira warbaahiino ku dhisan xaqiiqda iyo runta kuwaasina cidi ma hadal-hayso oo waa ay ka maqan yihiin hadal-haynta warbaahinta.
Wararka horumarka iyo waxtarka leh waxay u wanaagsan yihiin kobaca iyo fahanka bulshadda se maanta dadkeenii ma dhagaystaan wararka ku saabsan horumarka, aqoonta iyo doodaha aan siyaasadda ahayn.
Ka dib warbaahintu markii ay qiimeysay qaabka kaliya ee ay caan ku noqon karaan ama bartooda warbaahineed lagu booqon karaa waxay noqotay inay soo daayaan wararka dadka iyo nabadaba lidi ku ah, xaqiiqdana ka fog , waxaanay noqotay inay soo daayaan ama qoraan warar aan sal iyo raad toona lahayn , xaqiidana ka fog ama aan qaran ahaan iyo bulsho ahaanba aan inoo wanaagsanayn kuwaas oo wargeysyadda , websiyada qaarkood daabacaan ama Tb-yadu soo daayaan.
Waxa jira Tv-yo iyo website yo si dhex-dhexaadnimo ah u shaqeeya una baddan arimaha bulshadda se kuwaasi cidi ma dhageysato mana hadal-hayso se waxa la dhegaystaa Tv-yada iyo websiteyadda Dagaaladda , qabyaaladda iyo isku jawaabka ka shaqeeya xaqiiqda iyo wanaagana ka fog.
Inagu marka aynu iska dayno daawashadda Tv- yadda ka shaqeeya ama soo daaya wararka dadka iyo dalkaba wax yeelaynaya ayaynu saameyn ku yeelan karnaa se haddaynu noqono xumaantana waan daawanayaa , wanaagana waan ka jeedsanayaaa waxaad la mid tahay qof wanaagana ka cararaya xumaanta taageeraya.
Warbaahinta ku shaqaysa dhex-dhexaadnimada iyo xaqiiqda aynu wehel iyo saaxiib ka dhigano haddii kale mustaqbalkeenu wuu lumayaa oo sidaa ay sheegayaan ayaynu noqonaynaa se haddii aynu daawano wanaaga , horumark iyo doodaha cilmiga ku dhisan waa aynu dhismaynaa , koreynaa , waxaana aynu gaadheynaa halka aynu rabno.
Warbaahinta waxaan leeyahay waxaad bulshadiina gashataan ayuunbaydun Aakhiro heli doontaan, waxaad bulshadiina gashataan ayuunbaad guran doontaan.
Warbaahinta wanaagga iyo xaqiiqda ku shaqeysa aynu dhiiri galino , amaano , oo aynu dadkaas koru-kac iyo abaal marinba siino si ay u bataan oo ay uga bataan kuwa balaayadda soo deynaya ama qoraya.
Taladaydu waa aynu dhiiri-galino warbaahinta wanaaga , horumarka iyo xaqiiqda ka shaqaysa si aynu u ilawno warbaahinta xumaanta iyo isku-dirka ka shaqaysa.
Mustaqbalka iyo fikirka caruurteenu wuxuu ku xidhan yahay waxa ay daawadaan, dhegaystaan, akhristaan iyo waxa ay waalidkood daawadaan ama ay u baddan yihiin ee ay xiiseeyaan waalidku.
Daawo war wanaagsan , warbixin xiiso leh iyo akhris faa’ido inoo leh si ay caruurteenu inoogu day-daan.
U badnaw warbaahinta daawashada, dhegaysiga, akhriska ee xaqiiqda iyo fikirka wanaagsan leh.
Korodhka maskaxdaada iyo aqoontaaduna waxay ku xidhan yihiin warbaahinta aad la xidhan tahay waxa ay ka shaqeeyaan ee ay so daayaan.
Booqo oo Yeelo goob warbaahineed oo aad wanaag , xaqiiq iyo cilmi korodhsi ka heshid se ha booqan goob aad dadka iyo dalkaba ku nacsiiya.
Farhan Mohamed Sultan Nur “Rakad”